Qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stockholm oo doonaysa in carruurta keligood socodka ahi sii joogaa degmada.
10 miljoner till ensamkommande
Waqtiga la suga gudo-galka baaritaanada magangeliyada oo dheeraaday
Mangeliyo doon weli loogu yeerin wareysiga Migrationsverket
Baarintaanka dalabayda magangeliyada.
Tiro gaaraysa 10 000 oo magangeliyo Sweden weydiisatay sannadkii 2015 ayaa weli loogu yeeriin waraysiga(intervjuga) hey’adda socdaalka.
Sharciyada KMG ah kuwoodii ugu horeeyey oo dhaci doona augusti
Inta uusan ka dhacin waa in uu qofku dalbado in loo dheereeyo
Kuwii ugu horeeyey sharciyada deganaasho ku meel-gaar ah ee la baxiyey markii uu soo baxay sharciga cusub ee socdaalka ayaa dhici doona bisha augusti.
Tirada qaxootiga doorta hooyga ay degi lahaayeen oo yaraaday
Ylva Johansson "Weli guul waarta lagama gaarin howshan"
Sannadkii ugu dambeeyay ayey aad hoos ugu dhaceen tirada soo-galootiga doorta ama la yimaada deegaankii ey ku noolaan lahaayeen.
Andersson: "Waxa aan rajeynayaa dad badan laga howl-geli adeega dadweynaha"
Liberalerna: "Ha la joojiyo dib ugu celinta dalka Afqaanistaan"
Dib ugu celinta Afghanistan.
Xisbiga Liberalerna ayaa isbaddel ku sameeyey aragtidiisa la xiriirta dib ugu celinta waddankooda dhallinyarada qaxootiga ah ee Afqaaanistan ka soo jeeda.
Da’yarta kelinimada ku timid oo loo dheereynayo sharciga deganaansho
Fati Pakyari: waa sharci dheef iyo dhiilo ba leh
Da'yarta kelinimada dalka ku timid.
Kadib marka ay soo dhameystaan waxbarashada dugsiga sare haddii lix bilood gudahooda ey ku helaan shaqo waxaa la siinayaa sharci deganaansho rasmi ah. Laakiin waa in ay waxbarashada ka natiijo keenaan.
Waraaqo aqoonsi iyo koontooyin bangi oo la kala iibsado
Waraaqaha aqoonsiga dalkaan Sweden iyo koontooyinka bangiyada oo si suuq madow ah iyo waliba si cad oo bareer ah loo kala iibsado ama loo kala kireeysto.
Macallin yarada ka jirta waxbarashada luuqada ee SFI
Macallin yarada ka jirta waxbarashada luuqada ee SFI loo yaqaano ayaa saameeysay dadka halkaas wax ka dhigta.
Bogg af-soomaali ah oo arrimo xasaasi ah ka warramaya
Wasiirada sinaanta: "Waa in ay dhalinyaradu ka qeeyb qaatan maclumaadkan"
Shalay ayaa la shaaciyay bogga Youmo. Waa bogg cusub oo lagu talo galay dhallinyarada waddanka ku cusub halka ay jawaabo la xidhiidha jidhka, galmada, mukhaadaraadka, caafimaadka iyo sinaanta laga heli karo.
Qiyaastii 14 000 oo ruux oo la qiimeeyn doono da'dooda
Codsiga magan-gelyo doon.
Wakaaladda baarista dunuubta Rättsmedicinalverket oo bil dabadeed u gudbin doonta wakaaladda socdaalka caddeeyntii ugu horreeysay ee da’da.
Qiimeeynta da'da oo aan qaab dhameeystiran loo sameeyn
Qaybtii ugu dambeeysay
Lyssna på Ruushak iyo Sweden oo kulmi doona. Madaxdii dugsiga Al-Azhar oo jeelka la dhigey. 1500 ayaa sannadkii is dila Sweden.
Ruushak iyo Sweden oo kulmi doona. Madaxdii dugsiga Al-Azhar oo jeelka la dhigey. 1500 ayaa sannadkii is dila Sweden. kl 16:33
Soo degso(2:30 min, MP3)
Lyssna på Sacuudiga oo lacag siiya iskuullada qaarkood Sweden. Gabar 17 jir oo la diley. Basaas ruush ah la tuhunsan yahay.
Sacuudiga oo lacag siiya iskuullada qaarkood Sweden. Gabar 17 jir oo la diley. Basaas ruush ah la tuhunsan yahay. Igår kl 16:33
Soo degso(2:57 min, MP3)
Lyssna på Madowga iswiidhishka oo la faqooqo. Tirada qaxootiga noqda oo hoos u dhacday iyo tirakoobkii svt/novus ee noveembar.
Madowga iswiidhishka oo la faqooqo. Tirada qaxootiga noqda oo hoos u dhacday iyo tirakoobkii svt/novus ee noveembar. fre 16 nov kl 16:33
Soo degso(2:28 min, MP3)
Lyssna på Af hayeenka baarlamanka oo Annie Lööf u xilsaaray dawlad soo dhis. Maxkamadda sare ee socdaalka oo go'aan gaartay.
Af hayeenka baarlamanka oo Annie Lööf u xilsaaray dawlad soo dhis. Maxkamadda sare ee socdaalka oo go'aan gaartay. tor 15 nov kl 16:33
Soo degso(2:08 min, MP3)
Sacuudiga oo maalgeliya iskuullo gaar loo leeyahey, Gabdho gacanta isugu tahay Trollhättan, Jaajuus Ruush ah oo isku dhex qariyay weriyeyaal
Sacuudiga oo maalgeliya iskuullo gaar loo leeyahey, Gabdho gacanta isugu tahay Trollhättan, iyo Jaajuus Ruush ah oo isku dhex qariyay weriyeyaal
Wararka codeeynta 2018
Doorashooyinka saddexda gole ee dalka ayaa dhici doona sagaalka bisha sebteembar 2018. Halkan waxaad ka daalacan kartaa dhammaan wararka la xiriira doorashada.
Idaacadda Iswiidhen waa shirkad ku dhisan xayeeysiin la’aan iyo afkaar madax-bannaan, hoowsheeduna tahay sidii dhageeysyeyaasha da’ walba iyadoon loo aabba yeeleeyn jinsiga uu ruuxu yahay rag iyo haween, dhaqanka uu ka soo jeedo iyo waddanka uu asal ahaan u dhashay.